Dib u soo kabashada DWG Sawir laga soo qaaday Temporary Faylasha
Bogga ugu weyn Products DataNumen DWG Recovery Dib u soo kabashada DWG Sawir laga soo qaaday Temporary Faylasha
Marka muuqaalka otomaatigga ah ee 'Autosave' loo daayo AutoCAD, wuu sameyn doonaa si toos ah u sameyso faylal keyd ah markaad ka shaqeyneyso sawir. Sida caadiga ah, faylasha keydka ah ayaa lagu keydin doonaa Windows temporary galka iyo kordhinta faylka waa .sv $.
Marka masiibada xogta dhacdo, tusaale ahaan, AutoCAD shil ama haddii kale si aan caadi ahayn loo joojiyo inta lagu jiro fadhiga, waad soo kaban kartaa xogta ku kaydsan.sv $ faylasha adoo raadinaya feylka keydka, dib ugu magacdaro.sv $ kordhinta ilaa .dwg ka dibna furitaanka faylkaas AutoCAD. Faylka keydinta otomaatigga ah waxaa ku jiri doona dhammaan macluumaadka sawirada markii ugu dambeysay ee otomaatiga ordo.
Haddii AutoCAD ay soo wariso qalad marka la furayo feylka autosave-ka, markaa taasi waxay ka dhigan tahay faylka autosave sidoo kale waa la musuqmaasuqay ama la dhaawacay masiibada xogta awgeed.
AutoCAD waxay leedahay amar lagu soo koobay "Ladnaansho" oo loo isticmaali karo in lagu soo ceshto faylka autosave ee musuqmaasuqa ama waxyeellada soo gaadhay, sida soo socota:
Xullo liiska Fayl> Adeegyada Sawirka> Soo Kabso
Sanduuqa wadahadalka Xulo Faylka (sanduuqa wadahadalka xulashada feylka caadiga ah), gal magaca faylka sawirada musuqmaasuqa ama waxyeellada leh ama dooro feylka.
Natiijooyinka soo kabashada waxaa lagu soo bandhigaa daaqada qoraalka.
Haddii feylka la soo ceshan karo, sidoo kale waxaa laga furi doonaa daaqadda weyn.
Haddii faylka aan lagu soo ceshan karin AutoCAD, markaa waad isticmaali kartaa badeecadeena DataNumen DWG Recovery si loo hagaajiyo feylka keydka gawaarida ee musuqmaasuqa iyo xallinta dhibaatada.
Muunad faylka keydinta sample_autosave.sv $
Aasaaska Aqoonta ee AutoDesk
Fahmitaanka keydinta AutoCAD iyo faylasha kaydinta